Uhlaziyo lwe-Adobe Photoshop ngoKhetho lweSifundo esiphuculweyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uhlaziyo lweAdobe kwiFotohop eneendaba ezibalulekileyo kwinguqulelo yedesktop
UManuel Ramirez | | Idizayini yeMifanekiso, Photoshop
Kwiiyure nje ezidlulileyo I-Adobe ibhengeze uhlaziyo olukhulu kwikhathalogu yayo enkulu yeenkqubo ijikelezwe phantsi kwelifu lokudala. Kule posi siza kuthetha ngabo beza kwi-Photoshop kwinguqulelo yedesktop yayo.
Njengoko i-Adobe ikhankanya kakuhle, le yeyona seti inkulu yeempawu eziziswe kwi-Adobe MAX kwinkomfa ka-2019. ukuphucula "umlingo" wokufunda komatshini kwiAdobe Sensei kunye nokwenza ngcono kokuhamba komsebenzi ukunciphisa ixesha lokuvelisa. Ziphose kuyo.
I-Adobe ibeke yonke inyama kwi-grill yokuphucula kakhulu umsebenzi woKhetho lweSifundo ukuphucula ngokukhawuleza iziphumo zokukhetha ezizenzekelayo.
Sibona uphuculo olukhulu kolu luhlu lwemifanekiso ukuze ubone ukuba isebenza njani kwi-2019 kwaye yenza njani ngoku; eneneni sikubonile oku kukhethwa kwifayile ye- Ikhamera enkulu yeAdobe Photoshop ikhutshwe kwi-Android nakwi-iOS Kwiveki ephelileyo.
Ngapha koko injalo uhlawule ngokukhethekileyo iinkcukacha zeenwele kwiifoto zemizobo kwaye zihlala ihashe lemfazwe ekufuneka silwe nalo xa sifuna ukukhetha imvelaphi yefoto.
Enye yezona zinto zibalaseleyo kwiFotohop ibikho kwi-Adobe Camera Raw yamava omsebenzisi. Kukujongano olulinganisa olwanamhlanje lwe-Lightroom ethathwa yiKhamera eluhlaza ngoku. Ngeesikrini ezinikezelweyo unokufumana umbono okhawulezileyo wophuculo olubonakalayo kwizilayida nangaphezulu.
Kananjalo akufuneki sidelele Inqaku elitsha lokuvula ngokuzenzekelayo leefonti zeAdobe xa kuvulwa uxwebhu. Umahluko omkhulu kukuba xa ngoku sivula uxwebhu kwaye ezo fonti zilahlekile, iAdobe Photoshop iyazikhangela ngokuzenzekelayo ukuze ingasiceli ukuba siqale le nkqubo. Ngoku yonke into iyazenzekela.
Okokugqibela zineenoveli ezimbini ezingaphezulu: iipateni ezinokujikwa kwaye Ukuchongwa kwefonti kunye neFonti. Eyokuqala akufuneki ichaze into eyenzayo, kwaye eyesibini iyakwazi ukuwuchonga umthombo womfanekiso.
Ezi zi ezona zinto zibalulekileyo zitsha zeFotohop kuhlobo lwedesktop. Kungekudala siza kukhupha iindaba zenguqulo yedesktop kunye nalo lonke iLifu lokuDala, ke ungabaphosi!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Uhlaziyo lweAdobe kwiFotohop eneendaba ezibalulekileyo kwinguqulelo yedesktop
Uyenza njani iphethini nge Photoshop
Unyango lobugcisa kunye ne-mandalas: indlela yokuyila enokusinceda soyise uxinzelelo